YEYINTNGE(CANADA): Friday, November 05
Will Suu Kyi’s release overshadow election?
Published On Thu Nov 04 2010
This file photo taken on November 4, 2009 shows Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi smiling followingameeting with US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Kurt Campbell atahotel in Yangon.
HLA HLA HTAY/AFP/Getty Images file photo
When Nelson Mandela was released near Cape Town after 27 years behind bars, an American news weekly ranawickedly incisive cartoon.
In panel number one, two apartheid jailers throw Mandela into prison.
“In you go Mandela,” says one.
Panel two shows the same jailers releasing him decades later, only now Mandela emerges asaTitan – 10 times the size of the prison itself.
“That’ll teach you,” one guard says.
Four years later, Mandela had changed history and was South Africa’s president.
But what of Burma’s jailed opposition leader and democratic icon, Aung San Suu Kyi?
How will she emerge from her prolonged house arrest next week when her term is finally up? Can the woman who won the 1991 Nobel Peace Prize change the course of her country’s history?
As the nation readies for national elections Sunday — the first since 1990 when Suu Kyi and her National League for Democracy wonalandslide, only to be jailed later — her followers look forward to Nov. 13, the day of her expected release.
They hope that date will markarenewed campaign for democracy inside the country, bolstered by Suu Kyi’s ability to draw tens and even hundreds of thousands of people into the street.
“It will beabig moment,” promises Aye Min Soe,aformer political prisoner and video journalist who is holed up inacamp in the Thai border town of Mae Sot.
“The people of Burma still want change,” he says by phone from exile. “They still want their true leader — and that leader is Aung San Suu Kyi.”
Min Soe, best known as the star of the Oscar-nominated documentary Burma VJ, which tells the story of citizen-journalists trying to get video out of the country duringa2007 uprising, says video will still get out if mayhem happens this week.
“We havealot of people on the ground,” he says.
Sunday’s vote in Myanmar — as its military rulers have rechristened Burma — has been widely condemned by the international community asa“sham,”adesperate attempt by the military regime to slip out of uniform and into civilian clothes to run for election inaso-called transition to democracy.
The junta is so anxious to putanew face on its government that last month it unveiledanew flag,anew seal andanew anthem.
But few countries are buying into it.
The junta has barred international election monitors, banned incoming foreign journalists and reserved 25 per cent of the seats in the election exclusively for the military.
The government has also banned voting in restive ethnic areas, saying it simply cannot oversee voting there.
And earlier this year when Suu Kyi’s own NLD announced it wouldn’t participate, the junta angrily shut the party down.
Suu Kyi won’t be voting and she has urged others to consider doing the same — although she stopped short of calling foraboycott.
“The Lady,” as she is known in whispered conversation throughout the country, has spent 15 of her last 21 years under detention.
The personal price has been painfully high: She has never met her grandchildren; hasn’t seen her two sons foradecade; and when her late husband Michael Aris was dying of cancer in Britain in 1999, the junta denied himavisa to visit her.
But the cost to Myanmar has also been high: it remainsapariah state, notorious for its oppression, including torture.
This year the United Nations special rapporteur for human rights in Burma, Tomas Quintana, issuedadamning report citing “a pattern of gross and systematic violations of human rights which has been in place for years and still continues.”
He called foracommission of inquiry into war crimes against supreme military leader Gen. Than Shwe and other generals, which Canada supports.
Bo Kyi also supports that call.
“Torture is very common,” says Kyi, who founded the Assistance Association for Political Prisoners in Burma, an organization also based in Mae Sot. “This year the military regime has even used sexual violence against male prisoners. We have documented evidence that police officers put sticks into the anus of detainees they hold. This is the worst kind of torture and it is happening this year.”
Bo Kyi is amonga100,000-strong Burmese refugee community inside Thailand.
Despite all odds, he continues to campaign for the release of all political prisoners back in his country, including Suu Kyi.
There are 2,203 political prisoners held inside Burma, he says, including 20 students arrested just last month in the capital of Rangoon — called Yangon by the junta — for distributing leaflets informing people of their right to vote, or not vote.
He knows the experience of detention well.
He was first arrested while dining with his family on March 15, 1990. He was hooded, handcuffed and driven off toadetention centre where he was thrown intoatiny cell splattered with the blood of others who had come before him.
Beaten, he was then dragged beforeamilitary court without representation byalawyer.
He had been arrested, he says, for participating inapublic demonstration.
“An officer asked me, ‘Have you committedacrime?’ and I replied simply, ‘No I have not.’
“He replied, ‘Three years in prison with hard labour.’ ”
After his release, Bo Kyi continued his political activities and was later jailed forafurther five years.
Finally, when they came to his home the last time in 1999, he had been tipped off and fled the country.
For the past decade he has continued to advocate for prisoners — especially those inside the notorious Insein Prison, north of Rangoon,afacility built for 5,000 that now houses between 9,000 and 10,000 prisoners, he says.
But he, too, holds out hope that the campaign for democracy will reignite when Suu Kyi is freed.
“In the end, sooner or later, the people will again show their support for Aung San Suu Kyi,” he says. “They still see her as their leader.”
But not every one is sure she’ll be freed.
Sources inside Burma who are inaposition to know, say she has not been told her release is imminent.
Her Washington-based international lawyer, Jared Genser, cautions that nothing is clear yet.
“She remains in good health and good spirits,” he says, “and she is keenly watching developments.”
But where others believe that Myanmar’s foreign minister made it clear in Hanoi last week that she would be released Nov. 13, Genser does not.
The junta, however, is facingakind of Catch-22, he suggests.
“Keeping her under house arrest, keeps her bottled up . . . but keeping her bottled up only increases the attraction Burmese people have for her.”
And continuing to hold her after an election, especially one aimed at establishing the regime’s legitimacy before the international community, “doesn’t exactly send the right message,” adds Genser.
Some say the election — despite all of its well-designed restrictions — isasign that the junta is “inching” towards democracy.
In fact,aparty formed byasmall number of disaffected members of Suu Kyi’s NLD — running as the National Democratic Force — hopes the election will beastarting point for change.
“I don’t seeasingle sign that they’re ‘inching’ towards anything other than trying to solidify their grip on power,” says Genser. “Reading anything into this other than that, is either naive or stupid.”
Thant Myint-U however begs to differ.
Grandson of former UN secretary general U Thant andaBurmese historian and author, Thant Myint-U says the election isastarting point, but one that has to be seen in the context of Burmese history.
“If one accepts that this isacountry in which there has been virtually no political freedom for 60 years, then I think we have to start looking for any openings on which we can build,” he says in an interview from Hanoi.
He, too, supported sanctions against the military regime in an earlier time, but today he says he was wrong.
And so is Canada, he says, in placing what Foreign Minister Lawrence Cannon has called “the toughest sanctions of any country against the Burmese regime.”
Canada, says Myint-U, is “absolutely wrong.”
And he’s uncertain about Suu Kyi’s future role.
“She can’t go back to her old agenda,” he says. “If she does, I don’t think she’s going to get very far.”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/05/20100အကြံပြုခြင်း
မနက်ဖန် နေ့လည်၁နာရီ Ottawa: Human Rights Monument(at Elgin Street and Lisgar)
5 Nov 2010 ဒိုင်ယာရီ
5 Nov 2010 Yeyintnge's Diary
ဒုတိယပင်လုံ ... စီအာပီပီသဘောတူ
အောင်ဇော် Friday, 05 November 2010 20:17
စစ်အစိုးရက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲဟာ တိုင်းပြည်မှာ အမျိုးမျိုးအစားစား ရှိနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကို ပြန်လည် သင့်မြတ် လာစေမယ့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတခု တည်ထောင်နိုင်မယ့် လမ်းပြမြေပုံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကေအိုင်အို တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ -Ryan)
ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက မကြာသေးခင်မှာ ရုရှနိုင်ငံလုပ် Mi-24 စစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ် အစီး ၅၀ နှင့် Mi-2 သယ်ပို့ ရဟတ်ယာဉ် ၁၂ စီး ၀ယ်ယူမှုက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တလျှောက်က နယ်မြေတွေကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေကို စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတဲ့ကာလမှာ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့ ဖိအားပေးမှုက စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်အုပ်စုတွေကြား တင်းမာမှုတွေကို ပိုပြီး မြင့်တက်စေပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ အပစ်ရပ်အဖွဲ့အများစုက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့ ငြင်းဆန်တာနဲ့အမျှ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ နောက်ဆုတ်ရင်ဆုတ် ဒါမှမဟုတ် လှုပ်ရှားမှုတခုခု လုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပွင့်လင်းရာသီကာလမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် ပြဿနာက ဘယ်သူ့ကို စတိုက်မလဲဆိုတာပါပဲ။ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ အတော်များများကတော့ နိုင်ငံရေးအရ အောင်မြင်မှုရဖို့ အားအနည်းဆုံး လက်နက်ကိုင်အုပ်စုကို စတိုက်ပြီး နောက်မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ အချိန်ကြန့်ကြာမှာ သေချာတဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသက အားအကောင်းဆုံး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေကို အသစ်ပြန်စတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ သယ်ပို့ ရဟတ်ယာဉ်တွေ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက စစ်မြေပြင်မှာ အကျအဆုံးများတာကို ရှောင်ရှားလိုတဲ့အတွက် ရုရှလုပ် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းဒေသ စစ်ဆင်ရေးတွေအတွက် အနေတော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်က “ဝ” ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) နဲ့ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရက “ဝ” တပ်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မြို့နယ် ၄ ခုမှာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ ကြေညာထားပြီး ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ခုရဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်မှုကိုလည်း ပစ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ် ၂ ခုစလုံးဟာ အဆိုပါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက် လက်တုံ့ပြန်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တခါ KIA ရဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO) ကို အစိုးရနဲ့အပစ်ရပ်ဖို့ သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ် စစ်အစိုးရရဲ့သတင်းစာတွေက “သောင်းကျန်းသူ” လို့ ပြန်လည်ဖော်ပြ သုံးနှုန်းခဲ့တဲ့အတွက် မကြာခင်ကပဲ ကချင်ပြည်နယ်မှာ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ် ဟာ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မကြာခင်က ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ တိုင်းမှူးအသစ်တွေဟာ KIA ကို စစ်ရေးအရ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ချင်တာလား၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ဖို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ခြိမ်းခြောက်လာမှုတွေအပေါ် ကချင်ခေါင်းဆောင် တွေက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီး လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကို စဉ်းစားလာစေပါတယ်။
စစ်အစိုးရရဲ့ “သောင်းကျန်းသူ” ဆိုတဲ့ အသုံးကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ KIO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဆင်ဝါ က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တခုကို အဲဒီလိုဖော်ပြ ပြောဆို တာ ဟာ သင့်လျော်တဲ့ အသုံးအနှုန်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်က လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကလည်း စစ်အစိုးရရဲ့အသုံးအနှုန်း အပြောင်းအလဲကို အံအားသင့်ခဲ့ကြပါ တယ်။
“သတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ ကျနော်လန့်သွားတယ်ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) လို အဖွဲ့မျိုးကိုပဲ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းပဲလေ” လို့ အမည် မဖော်လိုသူ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာတယောက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဒါဟာ နိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ပြည်တွင်းစစ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လက္ခဏာတွေပါပဲ” လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းဒေသက ကချင်နဲ့ “၀” ခေါင်းဆောင်တွေက စစ်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ
လေယာဉ်ပစ်လက်နက်တွေ၊ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို ရယူစုဆောင်းထားခဲ့ပြီး သူတို့တပ်တွေကို အဓိက အရေးပါတဲ့
တောင်ကုန်းထိပ်တွေမှာ တပ်စွဲထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ UWSA နဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က “ဝ” တပ်က သူ့ရဲ့ဌာန ချုပ် ပန်ဆန်းက လက်ရွေးစဉ်တပ်တချို့ အပါအ၀င် တပ်ရင်း ၃ ရင်းကို ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာ တပ်စွဲနေရာယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် UWSA နဲ့ KIO တို့ဟာ သူတို့တပ်စွဲထားတဲ့နေရာကိုပဲ ကာကွယ်ပြီး နောက်တန်းမှာပဲနေဖို့ မရည်ရွယ်ကြပါဘူး။ တကယ်လို့ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင် သူတို့က အတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ဦးတည်တဲ့ မြို့ပြစစ်ဆင်ရေးစီမံချက်တခု ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့အပြင် စစ်အစိုးရရဲ့ အဓိကထိုးစစ်တွေကို ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ “၀” တပ်တွေနဲ့ KIO က KNU, မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) နဲ့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) တို့ပါဝင်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်း သား အုပ်စု ၄ ခုနဲ့ မဟာမိတ် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတခုကို တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင် တခြားလက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေကပါ ဆိုင်ရာ သူတို့နယ်မြေ တွေမှာ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဆိုပါတယ်။
“ဗမာစစ်တပ်က ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင် တဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံထဲမှာ စစ်မျက်နှာအမျိုးမျိုး ဖွင့်ပစ်ဖို့ ရည် ရွယ်ထားပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် သူတို့ဟာ နေရာတနေရာတည်းက သူတို့တပ်တွေကို စစ်ကူပေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်လာသူတိုင်းကို ခုခံကာကွယ်ရတော့မှာပါ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်တွေကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက် ဖို့ ပိုပြီးကောင်းအောင် ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ထားတာတွေပါပဲ” လို့ KNPP ရဲ့ တပ်မှူးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဘီးထူးက ပြောပြပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဲဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာ စစ်အစိုးရက တိုက်ခိုက်လာတဲ့ အခါမှာ ညီညီညွတ်ညွတ် ဆက်ရှိနေပြီး စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ပြန်လည် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နိုင်မလား ဆိုတာကတော့ ဆက်ပြီးကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ သူပုန်တပ်တွေဟာ သူတို့ကို ပထမဆုံး တိုက်ခိုက်လာမလားဆိုတဲ့ ကြောက်လန့်မှုနဲ့လှုပ်လှုပ် ရှားရှား ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကရင်၊ မွန်နဲ့ ရှမ်းတပ်တွေဟာလည်း တောင်ပိုင်းဒေသနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က သူတို့ရဲ့ နယ်နိမိတ် ပိုင်နက်တွေကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ တိတ်တဆိတ် ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
KNU ရဲ့ စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) ဟာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ တာ ဆယ်စုနှစ် ၆ ခု ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်က KNLAကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော်(DKBA) ဟာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်ကိုင်တုတ် ဖြစ်နေပြီး KNLA နဲ့ မကြာခဏ တိုက်ခိုက် နေခဲ့သလို DKBA တပ်ဖွဲ့အင်အား အတော်များများက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖို့ သဘောတူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်မှာ တပ်စွဲထားတဲ့ မြန်မာတပ်တွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ဒါမှမဟုတ် စစ်အစိုးရရဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသ ပေါ်မှာ အဓိကထားမှုကြောင့် ဒေသအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ အချိန်ကြန့်ကြာလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ အစောပိုင်းက ပြဆိုနေမှုတွေအပေါ် အလေးမထားခဲ့ပါဘူး။ ကရင်တပ်မှူးတချို့ကလည်း စစ်အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးမှပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပြီး စစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေဟာ လုပ်ဆောင်နေဆဲပဲ ရှိပါသေးတယ်။
၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စစ်အစိုးရက KNLA တပ်မဟာ ၅ ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရာမှာ လေယာဉ်ပျံကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရွာသူရွာသားပေါင်းများစွာဟာ တောထဲတောင်ထဲကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ဒါမှမဟုတ် ဘေးကင်းတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အဆိုအရ တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် မြန်မာစစ်တပ်ဟာ တပ်မဟာ ၅ နဲ့ သံလွင်မြစ်ကမ်းပါးပေါ်က KNLA စခန်း တွေကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ တခါထပ်ပြီး လေယာဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်အစိုးရနဲ့ မွန်သူပုန်တွေကြားမှာလည်း သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတိုးများလာနေပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ပေးပို့တဲ့စာမှာ စစ်အစိုးရက မွန်အပစ်ရပ်အဖွဲ့အနေနဲ့ လက်နက်မစွန့်လွှတ်ဘဲ မြောက်ပိုင်းဒေသ က ကချင်တွေလိုပဲ ပြည်သူ့စစ်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဥပဒေပြင်ပကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
“တကယ်လို့သာ အနာဂတ်မှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အရင်တုန်းက တိုက်ခိုက်ခဲ့သလို တောထဲမှာပဲ တိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့မွန်လူမျိုးတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့က ရန်သူကို လျှို့ဝှက် ပြောက်ကျားစစ် ဆင်နွှဲရပါလိမ့်မယ်”လို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ပြောပါတယ်။ “အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တတိုင်းပြည်လုံး ခရီးပေါက်ပြီးနေပြီ။ သူတို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေ ဘယ်နေရာမှာဆိုတာ ကျနော် တို့ သိနေပြီလေ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) (SSA-S) နဲ့ ကရင်နီ လက်နက်ကိုင် တပ်တွေကလည်း စစ်အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်အတွက် သူတို့ရဲ့တပ်တွေကို နေရာချထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ ပိုပြီးအင်အားနည်းပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ခြေမှုန်းခံရ မှု ကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ စစ်ခြားဒေသတခု ဆက်ပြီးထားရှိဖို့ မျှော်လင့်ရဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပြန်လည်စုစည်းပြီး စစ်အစိုးရကို တန်ပြန် ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ လုံခြုံတဲ့နေရာလေးတခု ပေးထားဖို့ သိမ်းသွင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အုပ်စုငယ်လေးတွေကလည်း သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ စစ်ပွဲမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီး စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ စိတ်အားထက်သန် နေကြပါတယ်။
“သူတို့ (စစ်အစိုးရတပ်တွေ) လာတဲ့အချိန်မှာ ပြောက်ကျား စစ်ဆင်နွှဲဖို့ ကျနော်တို့က အထူးတပ်ဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်း ပြင် ဆင် ထားပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် သတ်ဖြတ်နေကြတာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားရင်လည်း စစ်တပ်ကပဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်စိုးနေဦးးမှာပဲ” လို့ ဗိုလ်ချုပ် ဘီထူးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် SSA-Sက အရာရှိတယောက်က သူတို့တပ်တွေ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလိုနီဝါဒီတွေကို တိုက်ခိုက် သွား မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ သူ့တပ်တွေကို အားဖြည့်နေတယ်လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဒီအားကောင်းတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလွန် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ခြိမ်းခြောက်လာတာနဲ့အတူ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်
နိုင်ငံတွေကလည်း သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာမှာကိုတွေးပြီး စိုးရိမ်ပူပန် လာကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ဒါမှမဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခတခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဒုက္ခသည်တွေ သူတို့နိုင်ငံထဲမှာ လုံခြုံဘေးကင်းရာအဖြစ် လာရောက်ခိုလှုံတာတွေ တိုးများလာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အ
တွက် နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားလိုက်ပါတယ်လို့ စစ်ဘက်အရာရှိတွေက AFP သတင်းဌာနကို ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော်တို့က တခြားဘက်က လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတွေ ထွက်ပြေးလာကြမှာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ရော ကျနော်တို့ဘက်က လူတွေနဲ့လက်နက်တွေ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးသွားမှာကိုရော ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မှာ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေ တိုးမြှင့်ထားပါတယ်”လို့ တာ့ခ်ခရိုင် နယ်စပ်ဒေသတပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ပဒန် ရင်ပိုင်ဘွန်းဆွတ်က AFPသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ သူက တိုင်းရင်းသားသူပုန်တွေ အစိုးရကို ဆက်ပြီး တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ ဒေသဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မှာ စစ်တပ်ကပိုပြီး ကင်းလှည့်စောင့်ကြပ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ ဒုတိယတပ်မှူးချုပ်ဟောင်း နိုင်ခေါင်းရွတ်က “ထိုင်းစစ်တပ် အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေက သူတို့
အနေနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံအောင်လုပ်ချင်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့က မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်မှာလား မတိုက်ဘူး လားလို့ လွန်ခဲ့တဲ့လက လာမေးသွားခဲ့တယ်” လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
တရုတ်ကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ အနှစ်၂၀ ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ထဲကို ဒုက္ခသည် ၃၇၀၀၀ လောက် ၀င်ရောက်လာစေခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ လူမျိုးစုများ ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစု တပ်မတော်(MNDAA) ကို မြန်မာစစ်တပ်က ရုတ်တရက် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်လာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
“အန္တရာယ်ကို မနှစ်သက်တတ်တဲ့ ဘေဂျင်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ထဲမှာ အပြောင်းအလဲ အရောအထွေးတွေ
အားလုံးလုပ်တတ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးနေတဲ့
အချိန်မှာပဲ “၀”၊ ကချင်နဲ့ တခြားအဓိက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အုပ်စုတွေက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါဝင် ဆောင် ရွက်မှုမရှိဘဲ ပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်စရာတွေကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေနိုင်ပါတယ်”လို့ ဘေဂျင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခ လေ့လာရေးအဖွဲ့(ICG) အာရှအရှေ့မြောက်ဒေသ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ စတက်ဖနီ ကလိန်း အားလ်ဘရန့် (Stephanie Kleine Ahlbrandt) က မကြာခင်က ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလအတွင်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ သူက တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၁၉၂ ကီလိုမီတာ ရှည်လျှားတဲ့
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ အခြေအနေဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်မလာစေနိုင်ကြောင်း စိတ်ချစေခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်တောင်းက နယ်စပ်တလျှောက်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှု ရှိနေတဲ့အတွက် ချီးကျူးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာတော့ ဘေဂျင်းဟာ အသေအချာ မသိခဲ့ရပါဘူး။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ သူတို့အနေနဲ့
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖြေတခု ရှာဖွေဖို့ မစွမ်းဆောင် နိုင်ဘူးဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ် သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ တရုတ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာ စစ်တပ်က UWSA, KIO, MDAA နဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အပါအ၀င် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေ ထိန်းချုပ် ထားတဲ့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်နားမှာ ရာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ တပ်တွေကို စုစည်းခဲ့ပါတယ်။
ဘေဂျင်းက တရုတ်အရာရှိတွေက တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်က မြောက်ပိုင်းဒေသ စစ်တိုင်းမှူးဖြစ်ခဲ့ဖူး တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေး ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ အံ့သြတုန်လှုပ် စိတ်လှုပ်ရှား သွား ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ သတင်းစာတွေက နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မှာ မြန်မာအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေ ကြတဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအုပ်စုတွေကို နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို အပျက်စီးခံပြီး အကူအညီပေး လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ တရုတ်ကကတိပေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းကို လိုသလို လမ်းလွှဲ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်း တရုတ်အရာရှိတွေက “၀” နဲ့ ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေကို အဲဒီသတင်းတွေဟာ မမှန်ကန်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာတွေက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုရေးရာ ကိစ္စတွေမှာ တရုတ်တွေကို ယုံကြည်မှုမရှိပါဘူး။ ဘေဂျင်းဟာ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီက မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တာကို အရင်က ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဘေဂျင်းဟာ လောလောဆယ် စစ်အစိုးရ လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ရေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ နီးနီးစပ်စပ်ရှိနေပေမယ့် စစ်အစိုးရနဲ့ နယ်စပ်ဒေသက လက်နက်ကိုင်တွေကြားမှာ ပဋိပက္ခမဖြစ်ရေးအတွက် ကူညီ ကြားဝင် စေ့စပ်ဆောင်ရွက်နေပေမယ့် တရုတ်ဟာ နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်က တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိစပ်မှု ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ICG ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ KIO ဟာ ဘေဂျင်း၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ မကာအိုလို တရုတ်ရဲ့ အထူးအုပ်ချုပ်ရေး ဒေသတွေနဲ့ အလားသဏ္ဌာန်တူတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသမျိုး တွေ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့လို အခြေခံကျတဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုမျိုး
ပြုလုပ် ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
ICG ရဲ့ “တရုတ်ပြည်၏ မြန်မာမဟာဗျူဟာ - ရွေးကောက်ပွဲ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ စာမျက်နှာ ၂၀ ပါ အစီရင်ခံစာက ကချင်ဟာ ဘေဂျင်းထောက်ခံမှုကို တောင်းခံဖို့ဘုံငြိမ်းချမ်းရေး အဆိုပြုချက်တခုကို ရေးသားပြုစုနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေဂျင်းက အပစ်ရပ်အုပ်စုတွေကို သူတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းပြုလုပ်နေတဲ့ အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ ဇာတ်ပျက်စစ်အစိုးရကို နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံအားပေး နေတဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေခဲ့ပါတယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အပစ်ရပ်အုပ်စုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေနဲ့ နေပြည်တော်ကြားမှာလည်း ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့်တပ်အတွင်း သူတို့ကို ဖိအားပေးသွတ်သွင်းနေတဲ့ အချိန်ကတည်းက ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ထိခိုက်အားနည်းသွားခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အရင်က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ အဖမ်းခံ ခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး သူတို့နဲ့စကားပြောမယ့်သူ နေပြည်တော်မှာ တခြားဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူးလို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအားလုံးဟာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဖြစ်ရ မယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ အကျိုးဆက်အဖြစ် စစ်ရေးအရ အရေးယူခံ ရနိုင်တယ်လို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရန်လိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေအောက်မှာ အနည်းဆုံး အကြောင်းကြား သတင်းပေးတာမျိုး မလုပ်ဘဲ အပစ်ရပ် အဖွဲ့တဖွဲ့ ဒါမှမဟုတ် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အခြေအနေကို စိတ်ကူးကြည့်ဖို့ အတော်ခက်ခဲပါ တယ်။ တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပြည်သူ့စစ်တွေအားလုံးကို ရှင်းလင်းပစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး တိုက်ခိုက်လာတာ တွေ အားလုံးရဲ့ အလားအလာကိုတော့ ထည့်ပြောနေစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
တကယ်လို့ အဲဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မျက်နှာစာအမျိုးမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ တွေရဲ့ကာလကို ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ဟာ လုံးဝ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒုက္ခခံစားရမယ့်သူတွေက ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပြီး အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အဖို့ကတော့ သူတို့တွေ ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေဟာ ရုရှားရဟတ်ယာဉ်တွေလိုပဲ လျှင်လျှင်မြန်မြန် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းပေါ်က ကွယ်ပျောက် သွား တော့မှာကို တွေ့မြင်ကြရတော့မှာပါ။
(ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ဝေမိုး၊ စောရန်နိုင်နဲ့ လ၀ီဝမ်တို့ အချက်အလက် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။)
အောင်ဇော်၏ War or Peace? ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြပါသည်။
စစ်အစိုးရ အကြောက်ဆုံးလူရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်
ဂျပန်နာမည်ကျော် TBS သတင်းဋ္ဌာနမှဘဘဦးဝင်းတင်နဲ့ အင်တာဗျူး
သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ၁၉၉၄-ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေ စတင်ပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာတာ ဖြစ်တယ်။ စစ်အစိုးရယ်၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရယ်၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ ရယ် ပေါင်းပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီး အဆိုပြုခဲ့ခြင်းပါ။ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးက စစ်အစိုးရကို ဖိအားတွေ အမျိုးမျိုးပေးခဲ့ပေမယ့် အကောင်အထည်ပေါ်မလာဘဲ အခုဆိုယင် (၁၆)နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။
ရှိသမျှဖိအားတွေကို မထီလေးစားပြုပြီး ကိုယ့်မြင်းကိုယ်စိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် အပေါက်မျိုးချိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့မှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုလာခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြက်ရယ်ပြုလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်သားတွေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်သေးဘူး၊ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အကြောက်တရားလွှမ်းမိုးတဲ့ သဘောတရားအခြေခံနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ဓားမိုးအုပ်ချုပ်သွားမှာပါ။
အမှန်မတော့ ရှစ်လေးလုံးကနေ စပြီး ဒီကနေ့အထိ မြန်မာပြည်သားတွေဟာ စည်းကမ်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ရင့်ကျက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကလည်း ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက်မယ်လို့ ပြောခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့သာ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ သေနတ်ပြောင်းဝက လာတယ်၊ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးအတွက် လက်နက်နဲ့ အုပ်ချုပ်မှ ရမယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ခရီးဆက်နေတဲ့ စစ်အစိုးရကသာ ခေတ်နောက်ကျကျန်နေခဲ့တာပါ။
ဒီနိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲပြီးယင် အဲဒီသုံးပွင့်ဆိုင်အသံ တိတ်သွားမယ်လို့ စစ်အစိုးရက ထင်နေမှာပါ။ ၁၉၉၀-ခုရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်လန့်ကာ ချခဲ့ပြီ၊ လက်ရှိမျိုးဆက်သစ်တွေကလည်း ရှစ်လေးလုံးကို မမြင်ဖူးကြဘူး၊ အရင်က နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း နားသူနား၊ နာသူနာ၊ သေသူသေ အင်အားချိနဲ့ခဲ့ကြပြီ၊ ဝန်ထမ်းတွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်အိတ်ထဲ အကုန်ဖိတ်စေတယ်၊ ကျောင်းသားဆိုတာ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်ရဘူးဆိုပြီး ကြံ့ဖွတ်အသင်းဝယ်မှ စာမေးပွဲအောင်မယ့်ခေတ် ရောက်နေပြီ။ ဒီလိုပဲ စစ်အစိုးရက အပိုင်တွက်ပြီး အတိုက်အခံတွေဘက်မှာ အမှန်တရားပဲ ရှိမယ်၊ အဲဒီအမှန်တရားနဲ့ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူးလို့ အဟေတုကဒိဋ္ဌိဝါဒနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်နေတာပါ။
ပြဿနာဆိုတာ နှလုံးရည်နဲ့ ဖြေရှင်းစရာမလို၊ အင်အားရှိဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ စစ်အစိုးရက ရှန်တိန်းလုပ်နေတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာ ဘာလဲဆိုတာ စစ်အစိုးရက မသိနားမလည်တာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေးဆိုကတည်းက မြန်မာပြည်ဟာ မတည်ငြိမ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဆိုကတည်းက တိုင်းရင်းသားရေးရာပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုကတည်းက ဒီနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေအတိုင်း မအုပ်ချုပ်ဘူး။ စစ်အစိုးရပြောပြောနေတဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်(၄)ရပ်ကို တိုင်းရင်းသားတွေက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြဿနာလို့ တစ်ခွန်းထဲနဲ့ ရည်ညွှန်းခဲ့တာပါ။
အဲဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ခေါ်ပြီးမှ ရေးဆွဲကြဖို့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၁၉၉၀-ခုရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ခဲ့လို့ သူက ဦးဆောင်ပြီး ကျန်တဲ့ အောင်ပွဲခံပါတီများက ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများက ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်ရှိစစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အတူ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရမှာပါ။ အများသဘောတူနိုင်တဲ့ အခြေခံမူများကို ရရှိနိုင်မှသာ အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပါ။
အများသိတဲ့အတိုင်း စစ်အစိုးရဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို လျစ်လျုရှုပြီး တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို မသိကျိုးကျွံပြုကာ အခြေခံဥပဒေကို စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ နာဂစ်ဆိုင်းကလုန်းဝင်လို့ လူသိန်းချီ သေကြေနေတဲ့အချိန်၊ မိသားစုတွေ တကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ အကူအညီလိုနေတဲ့အချိန်မှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ထောက်ခံဆန္ဒမဲ(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရကြောင်း ကျေညာခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေကို မထေမဲ့မြင် ပြုခြင်း ဖြစ်တယ်။ အခြေခံဥပဒေကို ဘယ်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့မှ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းတွေရဲ့တည်ရှိမှုကို သေးသိမ်အောင် လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
အဲဒီနာဂစ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ကြံတဲ့အခါ ဆင်ဖြူတော်လည်း ဆိုက်လို့၊ ရခိုင်နဲ့အထက်မြန်မာပြည်ကို ဂီရိမုန်တိုင်းလည်း တိုက်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြိုဆိုလိုက်ကြတာ စည်စည်ကားကားပါပဲ။ ဒါကြောင့် နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ လုပ်တဲ့ ဂီရိရွေးကောက်ပွဲလို့ ပြောစမှတ်ဖြစ်ရတော့မှာပါ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများက သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို မဟာဗျူဟာအရ ဆုပ်ကိုင်ထားတုန်းပါ။ နိုင်ငံတကာမိသားစုများကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ အများပါဝင်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့၊ တရားမျှတအောင် လုပ်ဖို့ ဆော်အော်ခြင်းဖြင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို သွယ်ဝိုက်ပြီး အဆိုပြုတုန်းပါ။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်ကလည်း အများပါဝင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ၊ နိုင်ငံတကာလက်ခံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ အချိန်မနှောင်းသေးဘူးလို့ အဆိုပြုလျက် ရှိနေပါတယ်။
သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက် အရေးကြီးနေရတာလဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေက ဘာကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆကြပါသလဲ။ အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကကော ဘာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအဆိုပြုထားတဲ့ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံနိုင်ကြပါသလဲ။ နိုင်ငံတကာမိသားစုများ ကလည်း ဘာကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ အစဉ်တစိုက် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသလဲ။ စစ်အစိုးရကကော ဘာကြောင့် ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ကြောက်ပြီး တွန့်ဆုတ်နေရပါသလဲ။
* စစ်အစိုးရက စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်ထားတဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေ အာဏာရလာယင် ကမ္ဘာ့စစ်ခုံရုံးတက်ရမှာကို ကြောက်တယ်။
* တိုင်းရင်းသားတွေကို နေရာပေးယင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာပြီး ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ ကျဆုံးမှာကို ကြောက်တယ်။
* လွတ်လပ်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံခြားသာသနာပြုများ၊ နိုင်ငံခြားမီဒီယာများ၊ နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုများ စသည် ခြေကုပ်ယူပြီး ခြေချင်းလိမ်မှာကို ကြောက်တယ်။ (နအဖသတင်းစာအတိုင်း)
* တပ်မတော်က အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်အောင် လုပ်တယ်။
* ပြည်ထောင်စုအမည်အောက်မှာ တပြည်ထောင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်။
* နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်အောင် စီမံထားတယ်။
ဒီလောက် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လုပ်နေခြင်းမျှသာ ဖြစ်တယ်။ မိသားစုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့၊ အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို စစ်အစိုးရက အလိုမရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အတိုက်အခံပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သူတို့က ဆက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လို့မရအောင်၊ ပြိုကွဲအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း လက်နက်အပ်ခိုင်းတယ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ခိုင်းတယ်၊ ပြည်သူ့စစ် လုပ်ခိုင်းတယ်၊ အချင်းချင်းအထင်အမြင်လွဲအောင် လုပ်တယ်၊ ခွဲထွက်နိုင်အောင် အားပေးတယ်။
ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက တိုက်ပွဲမှာ အမြင်မဝိုးဝါးကြဘူး။ အများစုက စစ်အစိုးရနဲ့ မပတ်သက်ကြပါ။ အနည်းအကျဉ်းသာ ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာသဘောမျိုးနဲ့ စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်အရွေးခံကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း စစ်အစိုးရကို တုံ့ပြန်ဖို့ လက်မနှေးခဲ့ကြပါ။ အခုဆိုယင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။ လောလောဆယ်မှာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီတိုင်းရင်းသား(၆)ဖွဲ့ဟာ ဒီနိုဝင်ဘာလဆန်း(၂)ရက်မှာပဲ ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တစ်ခုကိုတောင် ဖွဲ့စည်းဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။
ဖက်ဒရယ်ဆိုယင် ကြောက်တတ်တဲ့ ပြည်တွင်းက အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ကလေးမြို့ညီလာခံကနေ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံခေါ်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ ဒီညီလာခံကို ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုနေ့အခါသမယမှာ ကျင်းပကြမယ့်သဘောပါ။ ညီလာခံကို သဘောတူကြတဲ့အဖွဲ့တွေကို ကြည့်ယင် အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်၊ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့မှ နိုင်ထွန်းသိန်းနဲ့ နိုင်ငွေသိမ်း၊ ကရင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်မှ စောဟာရီ၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးထောင်ခိုထန်အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ တက်ကြကြောင်း သတင်းမှာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ သူလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ ဒီညီလာခံကလည်း စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီနဲ့ ထပ်တူဖြစ်ကြောင်း သံသယမရှိပါ။ ဒါဟာ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ငြင်းပယ်ပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ချော် နေပြည်တော် ရောက်ရောက် နောက်တက်မယ့်အစိုးရအတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါ။
* လက်ရှိနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဟာ နိုင်ငံရေးဒီရေအတက်အကျကို ကောင်းကောင်း သိကြတယ်။
* စစ်အစိုးရနဲ့ သူကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးမယ့် နောက်တက်အစိုးရကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ ကောင်းကောင်းသိကြတယ်။
* လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်ချမ်းရေးအတွက် စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း သိကြတယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ပြဿနာဟာ သေးငယ်တဲ့ပြဿနာလို့ ကမ္ဘာ့က ထင်မြင်ယူဆကြလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာများစွာထဲက တစ်ခုကို လူနည်းစုပြဿနာလို့ အချို့နိုင်ငံတွေက သုံးနှုန်းဖော်ပြကြတယ်။ လူနည်းစုဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေ(၁)ရာခိုင်းနှုန်းကနေ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိကို ဆိုလိုတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟာ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိပါတယ်။ သူတို့နေတဲ့ ပြည်နယ်(၇)ခုဟာ နိုင်ငံရဲ့ (၅၇)ရာခိုင်နှုန်းမျှ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဒီနေရာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်ဒေသမှာ ဖြစ်တယ်။ သဘာဝသယံဇာတတွေ ပေါကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာ ဒီနေရာတွေပါ။ ဒီလောက် များလှတဲ့ လူဦးရေနဲ့ ဒီလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့ဒေသတွေမှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေယင် လူနည်းစုပြဿနာလို့ ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ တကယ့်အမျိုးသားရေး ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ဒါကို မသိကျိုးကျွံပြုတဲ့အစိုးရဟာ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားအစိုးရတစ်ရပ် မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒါကို သိရှိသဘောပေါက်တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့အရေးကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ်အောင် ကြိုးစားထိန်းသိမ်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အခု နယ်စပ်မှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကျင်ပးရေးကော်မတီတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်……
* မြန်မာနိုင်ငံဟာ ယူဂိုဆလားဗီးယားလို နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်။
* ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဟာ ခွင့်တူညီမျှ ရချင်တဲ့ဆန္ဒ ရှိကြတယ်။
* စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမှာ လူမျိုးများတန်းတူအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး အပြည့်အဝနဲ့ နေတတ်တဲ့ပါရမီ ရှိကြတယ်။
Demoractic Federation of Burma ပေါ်ပေါက်လာဖို့ စစ်အစိုးရ (သို့) ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ (သို့) တစည မရှိမှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ယင် နောက်တက်မယ့်အစိုးရက သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံမှ ဖြစ်နိုင်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အထက်ကအဖွဲ့နှစ်ခု ဆက်စပ်မှု ရှိကြကြောင်း မတရားစွပ်စွဲပြီး ထောင်ချလို့ ရသေးတာပဲလို့ ကြံ့ဖွတ်တို့ တွက်ယင် မှားမယ်။ သူတို့ ထင်သလို မဟုတ်တော့ဘူး။ မာရှယ်လောနဲ့ အုပ်ချုပ်တာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးလို့ အမည်ခံလိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး သူတို့ရဲ့ အစုတ်အပြတ်ဥပဒေကို နည်းနည်းပါးပါးတော့ ကိုးကားလို့ ရဦးမယ်၊ နောက်ပြီး ဒီအတိုက်အခံများဟာ အင်အားမသေးလှဘူး။ စာရေးသူအထင်ပြောရယင် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ လိုအပ်ယင် လက်နက်ကိုင်အင်အားတစ်သိန်းလောက်ကို အချိန်မရွေး ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်။ အတိုက်အခံပါတီဝင်တွေကလည်း အင်အားတိုးလာမှာ မုချပါ။ အာဏာရှင် အုပ်စုမှာ ကပ်ဖားသမားတွေကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တက်မယ့်အစိုးရဟာ ဗျာများကုန် မှာပါ။ ရွှေရည်စိမ်လွှတ်တော်ထဲက ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းအမတ်များကလည်း ဒီဘက်က အင်အားများလာယင် ပြန်ပါလာမှာမို့ ကြံ့ဖွတ်တွေ အထီးကျန်နေမှာပါ။ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေမှာပါ။ နေဝင်းရဲ့ မဆလအစိုးရထက် ပိုပြီး အခက်တွေ့နေမှာပါ။ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်မရယင် သုံးပွင့်ဆိုင်က သူတို့ ခေါင်းထဲ မဖြစ်မနေ ဝင်လာပါ့မယ်။
အချုပ်အားဖြင့် (၁၆)နှစ်ကြာ ရှေးမတိုးနိုင်တဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဟာ နယ်စပ်မှာ ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၊ ပြည်တွင်းမှာ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံမှ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ထောက်ခံမယ့် နိုင်ငံတကာ မိသားစုများ ပေါင်းမိယင် ပြန်ပြီးတော့ အသက်ဝင်လာမှာ သေချာတယ်။ နောက်ပြီး ၁၉၉၀-ခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ပယ်ဖျက်ဖို့ အားထုတ်တဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အင်အားပြင်းထန်တဲ့ တန်ပြန်တိုက်ပွဲကို ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီတန်ပြန်တိုက်ပွဲကို (၁၀)နှစ်လောက် ကြံ့ဖွတ်တို့ ခံနိုင်ယင် ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါ။
ကိုထိန်လင်းတို့ ကတော့လုပ်ချလိုက်တာ လန်ထွက်နေတာပဲ
လန်ဒန်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဧ။် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့် ကျင်ရေး စာရွတ်ဖြန့်လှုပ်ရှားမှု
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/05/2010 1 အကြံပြုခြင်း
မနက်ဖန် နေ့လည်၁နာရီ Ottawa: Human Rights Monument(...
လန်ဒန်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဧ။် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွ...